Kabsado iPhone Xiriirada - 2 Siyaabaha inuu ka soo kabsado Xiriirada ka iPhone
Lumay oo dhan xiriirada aad iPhone? Taasi qarow ahaantii, laakiin uma baahnid si aad u argagax. Tani software iPhone kabashada xiriir awood u in aad ka bogsato xiriirada iPhone tirtiray laba siyaabood. Akhri si aad xal u bartaan hoos ku qoran.
iPhone 6s (Plus) / iOS9 Software Xiriirada Recovery
3 siyaabood inuu ka soo kabsado xiriirada ka iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS!
Si toos ah soo kabsado xiriirada ka iPhone, gurmad Lugood iyo gurmad iCloud.
Ceshano xiriirada ay ka mid yihiin tirada, magacyada, emails, horyaal shaqo, shirkadaha, iwm
Taageerada iPhone 6s, iPhone 6s Plus iyo macruufka dambeeyay 9 buuxda!
Kabsado xogta waayay tirtirka, khasaaraha qalab, JAILBREAK, macruufka 9 casriyayn, iwm
Xulo ku eegaan ceshan xog kasta oo aad rabto.
1: Ladnaansho xiriirada ka iPhone
2: Ladnaansho xiriirada ka Lugood
3: Ladnaansho xiriirada ka iCloud
Qaybta 1aad: Si toos ah iskaan ceshan xiriirada ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Shardi: Waxaad u baahan tahay in aad iPhone gacanta, waana in si caadi ah loo isticmaalo. Waxa aad u baahan: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (a Windows ama Mac version)
Jooji isticmaalka aad iPhone la joogo xaq u marka aad tirtiray xiriirada ku yaal, waayo fursad fiican u soo kabashada. Markaas rakibi oo ay maamulaan software on your computer. Waxaad soo kaban karto, xiriirada tirtiray ka iPhone ah waxaa la in 2 tallaabo: iskaan, Kulanka Xiisaha & kabsado .
About Wondershare Dr.Fone ee macruufka: macruufka software adduunka ayaa soo kabashada xogta ugu horeysay u isticmaala qof ahaaneed, waxaad awood u inuu ka soo kabsado xiriir la tirtiro, fariimaha , sawiro , videos, qoraalo, taariikhda, cadaymaha cod iyo wixii la mid ah waxaad wacdaa ka iDevices kala duwan. Waxaa gebi ahaanba ammaan ah, si sahlan loo isticmaali karo oo waxtar leh.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone iyo iskaan u
Connect aad iPhone oo ay maamulaan Wondershare Dr.Fone barnaamijka macruufka on your computer. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala muhiimsan ee sida soo socota. Si fudud u riix Start Scan badhanka si ay u helaan waxa ay baadhayaan.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xiriirada iPhone
scan ka dib, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta la helay ka hor soo kabashada. Dooro Xiriirada in ay ku eegaan, calaamad iyo guji Ladnaansho .
Qeybta 2: Ladnaansho xiriirada iPhone kaga imaanayo Lugood
Shardi: Waxaad u baahan tahay in aad iPhone synced la Lugood ka hor inta aadan tirtiray xiriir ah. Waxa aad u baahan: Lugood, (optional: Wondershare Dr.Fone ee macruufka )
Waxaad soo celin kartaa iPhone xiriirada ka gurmad Lugood laba siyaabood: toos soo celin gurmad oo dhan via Lugood, ama eegista soo kabsado xiriirada ka gurmad ah via Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kuwa ugu haboon ee aad u.
Qalabka ay taageerayaan Waayo, kulli iPhone (6s iPhone 6s Plus iyo iPhone ka mid yihiin) Waayo, kulli iPhone
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Lugood content gurmad ka hor soo kabashada;
1) Soo celinta gurmad oo dhan ka Lugood
Disable auto .Wadashaqayntaas hore, ka hortagga aad iPhone ka syncing si toos ah:
Dadka isticmaala Windows: Orod Lugood, tag <inay Edit <rabtid ... <Devices.
Dadka isticmaala Mac, Orod Lugood, u tag <Lugood <rabtid ... <Devices
Markaas xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Tag ee "Qalabka" mar kale, doorato faylka raad raac ah oo aad iPhone oo guji "Soo Celinta" button. Markii ugu soo celin dhamaato, aad iPhone bilaabi doonaan iyo dhammaan dadka ay khuseyso ee gurmad waa aad iPhone hadda.
2) Xulo soo kabsaday xiriirada iPhone kaga imaanayo Lugood
Tallaabada 1. Scan ku file gurmad
Waxaa jiri doona liiska faylasha gurmad soo bandhigay, ka dib markii aad riix ka soo kabsado Lugood ee kaabta File on sare ee suuqa kala barnaamijka. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo riix Start Scan .
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xiriirada iPhone aad
Skaanka aad qaadataa oo keliya dhowr ilbiriqsi. Dhammaan waxyaabaha ka file gurmad ah lagu soo bandhigi doonaa faahfaahinta. Waxaad iyaga oo dhan ka akhrisan kartaa. Markaas calaamadee sanduuqa horteeda wax kasta oo aad rabto, iyo riix Ladnaansho button.
Qeybta 3: Ladnaansho xiriirada iPhone tirtiray kaga imaanayo iCloud
Shardi: Waxaad xoojiyaa aad iPhone la iCloud ka hor inta aadan badiyay xiriir ah. Waxa aad u baahan: iCloud
Waxaa jira laba siyood oo aad ku soo kabsado xiriirada ka gurmad iCloud: waxa ay isku biiraan si ay aad iPhone ama u celin doonaa iPhone.
Midowdo xiriirada iCloud aad iPhone: Tag Settings <iCloud . Log in ID Apple iyo demi item ee Xiriirada . Markaasaa waxaa u shid iyo dooran midowdo on fariin pop-up ah. Markaas dhammaan xiriirada in gurmad iCloud waa dib si aad u iPhone.
Soo Celinta gurmad iCloud in aad iPhone: Sidaas, waxaad u baahan tahay si aad u iPhone sida qalab cusub oo ag maraya in Settings <General <celi <masixi All Content iyo Settings , ka dibna dooran masixi iPhone on fariin pop-up ah. Marka Banaadir, waxaad dooran kartaa in Celinta ka kaabta iCloud .
Sida muuqata, sida ugu horeysay si weyn lagu talinayaa. Haddii ay jiraan sababo dhab ahaan gaar ah oo aadan sidaas samayn kara sida ugu biirtay by, hab labaad weli waxay noqon kartaa wax khiyaar ah.
Mid ka mid ah habka more: kabsado xiriir oo kaliya ka gurmad iCloud
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro gurmad iCloud iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka, si aadan u baahan inaad ku soo celiso gurmad oo dhan iyo dib u iPhone. Haddii aad rabtid in aad isku day ah, waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad in ay isku dayaan iskaa ah. Waxa kaliya ee aad qaadataa xoogaa daqiiqado ah.
Talaabooyinka ee xiriirada eegista ka soo kabsaday gurmad iCloud
Gal account iCloud
First of calaamad in aad xisaabta iCloud, si gurmad internetka lagu dambe baxey karo.
Download oo laga soosaaray
Ka dib markii helo, dooran gurmad aad rabto in aad kala soo bixi oo Macdan in 2 qasabno.
Marka scan ka istaago, waxaad ku eegaan karo oo ka soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka gurmad ah.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka - iPhone Xiriirada Recovery
Badan oo ku saabsan Wondershare Dr.Fone ee macruufka:
Talooyin fiicfiican u syncing la Google xiriirada aad iPhone
Wixii macruufka 7 iyo 8 macruufka dadka isticmaala, waxaad kala socon kartaa joogsato hoose si aad u hagaagsan marka aad la xiriirayso Google Xidhiidhada:
1. Settings tuubada> Mail, Xiriirada, Kalandarada> dar xisaabta> Google.
2. Ku qor macluumaadka loo baahan yahay in beeraha.
3. Hubi Xiriirada yahay.
Wixii macruufka 5 ama 6 macruufka dadka isticmaala, waxaad samaysan karta xiriir syncing la Google Xiriirada by tallaabooyinka soo socda:
1. Settings tuubada> Mail, Xiriirada, Kalandarada> dar xisaabta ...> kale> dar CardDAV Account.
2. Gali macluumaadka soo socda ee beeraha:
* User Name: cinwaanka email buuxa Google
* Password: xisaabtaada password Google
3. Tubada Next sare ee shaashadda si ay u dhamaystiraan Mudanayaasha.
Kaddib markii aad dhameysid Mudanayaasha, furo app Xiriirada on qalab aad. Syncing waa in ay bilaabaan si toos ah.
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro iPhone Xiriir